IHighlanders Idliwa 3-0 yiHarare City Emdlalweni weChibuku Super Cup
Isimo seqembu lenguqu ele Highlanders sesiphenduke insindabaphenduli ngemva kokuba leliqembu liphinde ladliwa kabuhlungu ngempelaviki edluleyo lapho elibhuqwe khona ngele Harare City emdlalweni wenkezo ye Chibuku Super Cup.
Abalandeli beqembu le Highlanders sebebingelelana ngamagama athi langalezo angani ngabantu abafelweyo ngemva kokuba iqembu labo libhuqwe ngele Harare City nge 3 ka nya ngeNsonto emdlalweni wenkezo ye Chibuku.
Kuthiwa langalezo nje ngoba impumela yangeNsonto itsho ukuba iqembu le Highlanders lisele lethuba lokuphakamisa inkezo ye Mbada kuphela kuzo zonke inkezo ezidlalelwa kusigaba saphezulu ese PSL.
Lokhu lakho akusoze kube lula ngoba ukuze iqembu le Highlanders lingene kunkezo yeMbada kuzamele libe liqede imidlalo yeligi likundawo yesine loba phezu kwalapho engalaneni yemiklomelo okuyinto abalandeli asebeyithandabuza njengoba iqembu labo abalithandayo seliphenduke laba ngumthatshuzwa kulamalanga.
Iqembu le Highlanders lihlohlwe imiklomelo eyisikhombisa emidlalweni yalo emibili edluleyo lona lingazange libisele njalo kuzamele libophe ziqine emidlalweni elisele layo kuligi yalonyaka.
Iqembu le Harare City lithe ngokunqoba kwalo ele Bosso lathola ilungelo elokuyadlala leqembu le FC Platinum kufinal eyenkezo ye Chibuku ngenyanga ezayo.
Iqembu le FC Platinum lifinyelele kufinal ngemva kokunqoba elikwenze ele Black Rhinos nge 1 ka nya ngoMgqibelo.
Sikhangele imidlalo ebikhona kwamanye amazwe;
Iqembu le Kaizer Chiefs selikhokhela ngemiklomelo elitshumi kuligi yaphezulu elizweni le South Africa ngemva kokunqoba elikwenze ele Ajax Cape Town nge 1 ka nya ngeNsonto okuyimpumela ekhuphule inani lemiklomelo elilayo yaya kumatshumi amabili lane ngemva kokudlala imidlalo eyithoba minwembili.
Ngemva kwe Chiefs kule Orlando Pirates, iBidvest Wits, iMamelodi Sundowns kanye le Ajax Capetown zona ezilemiklomelo elitshumi lane ngayinye.
NgaseNgilandi iqembu le Chelsea likhokhela iqembu elihlezi kundawo yesibili ele Manchester City ngemiklomelo emihlanu.
Iqembu le Chelsea lilemiklomelo engamatshumi amabili lambili ngemva kwemidlalo eyithoba minwe mbili kuthi iCity ilemiklomelo elitshumi lesikhombisa.
Elizweni le Spain iqembu le Barcelona lihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo engamatshumi amabili lambili ngemva kokudlala imidlalo eyithoba minwe mbili njalo litshiye iqembu elikundawo yesibili ele Sevilla ngemiklomelo emithathu.
Elizweni lamaJelimana iqembu le Bayern Munich yilo elihlezi kundawo yakuqala engalaneni yemiklomelo lilemiklomelo engamatshumi amabili ngemva kwemidlalo eyithoba minwe mbili kuthi elizweni lamaTaliyana iqembu le Juventus yilo elikhokhelayo engalaneni yemiklomelo lilemiklomelo elitshumi lathoba munwe munye ngemva kokudlala imidlalo eyisikhombisa kuthi ngemva kwalo kuleqembu le AS Roma lona eliliphefumulela entanyeni lilemiklomelo elitshumi lathoba minwe mbili.